विदामा पौडीको मज्जा ! (फाेटाे फिचर)
मुख्य पृष्ठप्रदेश १विदामा पौडीको मज्जा ! (फाेटाे फिचर)
सोमबार, २२ असार, २०७७ 0प्रतिक्रिया
सम्पन्न, विपन्न सबैसँग मन हुन्छ । मनमौजी गर्न को चाहँदैन ? उमेर पुगेकाले मन थाम्न सक्छन् । बाल मन कसरी थामिनु ? कसरी रोकिनु ? हरदम खुशी र उमंग खोज्ने नै बालापन उमेर हो । यहीँ उमेरमा खेलकुद र रमाइलो चाहिन्छ । बालबालिका रमाइलोको लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् ।
विद्यालय बन्द भएको ३ महिना भयो । सबै बालबालिकाहरुको आफूले खोजेको नसिब हँुदैन । प्रकृतिमा उपलब्ध अवस्थाको सदुपयोग गरेर रमाउने हो । टी.भी.र रेडियोमा पुगेपनि इन्टरनेटमा सबै बालबालिकाको पहँुच छैन । विराटनगर १२ बखरीका बालकहरु घर नजिक खोलामा पौडी खेलेर विद्यालय विदाको सदुपयोग गरिहेका छन् ।
पौडी खेल्न खोलामा पुगेका ज्ञानचन्द ऋषिदेवले विद्यालय बन्द रहकोले साथीहरु सँग पोडी खेल्न आएको बताए । उनी कक्षा ९ मा पढ्छन् । लकडाउनले विद्यालय बन्द छ, दिनभरि घर बस्दा दिक्क लाग्ने भएकोले साथीहरु सँग खेल्न आएको उनले बताए । ‘बिहान बेलुका घरमा पढे पनि दिउँसो अल्छी लाग्छ ।’ उनले भने ‘दिउँसो साथीभाइसँग खेल्ने गरेको छु ।’
विराटनगर १२ को बखरी क्षेत्रमा विपन्न समुदायको बसोबास रहेको छ । त्यहाँ डुबानको समस्या पनि छ । त्यहाँका अविभावकले सन्तानको शिक्षाको लागि खासै चासो लिएको पाइँदैन ।
खोलामा पौडी खेल्न कक्षा ४ मा पढ्ने कृतानन्द ऋषिदेव पनि पुगेका थिए । उनले पढ्नभन्दा खेल्न मनपर्ने बताए । यद्यपि उनी बिहान बेलुका पढ्ने गर्छन् ।
गाउँका साथी सबै पौडी खेल्न आएकोले आफूलाई पनि रहर लागेर खोलामा आएको उनले बताए । ‘विद्यालय नलाग्दा घरमा मात्र बस्दा अल्छी लाग्छ ।’ उनले भने ‘अल्छी लागेको बेला साथीसँग खेल्न मन लाग्छ ।’
एसईईको तयारीमा रहेका राजन यादव फुर्सदमा छन् । विद्यालय नभएकोले घरमै बसेर समय कटाउनुपर्ने उनको बाध्यता छ ।
घरमा टी.भी. हेरेर दिक्क लागेपछि गाउँमा साथीहरुसँग खेल्न निस्कछन् । उनी साथीहरुसँग गाउँघरमा खेल्ने घुम्ने गर्छ । ‘लकडाउनले विद्यालय बन्द छ ।’ उनले भने ‘वर्षाको कारण खोलामा बाढी आएकोले पौडी खेल्न आएको उनले बताए ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय बन्द गरिएको छ । विशेष कारणले विद्यालय सञ्चालन नहुँदा सन्तानको शिक्षा र सिकाईमा अभिवभावकले चासो राख्नुपर्ने हो ।
पौडी खेल्ने बालकहरुको समुदायमा चेतनाको अभावको कारणले अविभावकले चासो नलिने गरेको बखरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यानन्द शर्माले बताए ।
टीभी र मोबाइलको पहुँचमा भएका अभिभावकले बालबालिकालाई दूरशिक्षाको लागि उत्प्रेरित गर्नेभन्दा पनि आफ्नै रुचीका कार्यक्रम हेर्ने गरेको उनले बताए ।
शब्द /तस्बीर : यज्ञ अधिकारी